खरिद बिक्री खाता प्रमाणीकरणको म्याद पुस मसान्तसम्म थपियो – KhabarKhurak
काठमाडौं, २३ साउन । व्यवसायीको आग्रहपछि खरिद बिक्री खाता प्रमाणिकरणको म्याद थपिएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले व्यवसायीको सहजताको लागि पुस मसान्तसम्म म्याद थप गरिएको हो।
Tags: आन्तरिक राजस्व विभाग
२०७४ देखि बन्द भएकाे जग्गाको कित्ताकाट खुल्यो
सुनको भाउ घट्योः सुन र चाँदीको तोलाको कति ?
जनताकाे पसिनामा आश्वासनको वर्षा !
पाल्पा अस्पतालमा पिसिआर मेसिन जडानका लागि एक करोड निकासा